टोकियोको यी तिन खुल्ला ईटालियन रेस्टुराण्टमा रोमान्टिक डिनरको मजा लिनुहोस्। | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > टोकियोको यी तिन खुल्ला ईटालियन रेस्टुराण्टमा रोमान्टिक डिनरको मजा लिनुहोस्।
ईटालियन परिकार विस्वमै लोकप्रिय छ। जापानीहरु पनि ईटालियन खाना निकै रुचाउछन। टोकियोमा थुप्रै टप ईटालियन रेस्टुराण्टहरु छन्। यी रेस्टुराण्टले पिज्जा देखि फाईन डाईन सम्म गराउछन।
तर यदि हजुर आफ्नो रोमान्टिक ईटालियन डाईनिङ्ग अनुभवलाई अर्कै लेभलमा लान चाहनु हुन्छ भने यी तिन रेस्टुराण्ट चेक गर्नुहोस। यी तिनै रेस्टुराण्ट ओपन एर हुन्। यी रेस्टुराण्टमा मिठो खान मात्र नभई हजुरले टोकियोको रात्रि सहर को निकै राम्रो भ्यु पाउन सक्नु हुनेछ। कहाँ छन् त यी ति रेस्टुराण्ट ?
१. अल्लामंडा गार्डेन (Allamanda Garden )
टोकियोको हिप्स्टरहरु बस्ने ठाउ भनेर चिनिने गाइएनमाए र आओयामा ईच्योमे तिर जानु भएको छ भने पक्कै पनि यो ओपन एर रेस्टुराण्ट जानुहोस। अल्लामंडा गार्डेनले फ्युजन फुडको पस्काई संगै निकै शान्त र आनन्दित वाताबरण पनि चखाउने छ।
हजुरले डिनरको मजा बाहिर रहेको पूलको छेउमै लिन सक्नु हुनेछ। संगसगै आकाशमा ताराहरु र वारी परिका झलमल्ल बाल्ने टोकियोको स्काईलाईन हेर्न हुनेछ। यहाँ मिठो सी फुड संग संगै मुख्नै रसाउने स्टेकको पनि लिन सक्नु हुनेछ। यदि हजुर साकाहारी हुनुहुन्छ भने यहाँ हजुरले अर्गानिक साग सब्जी प्रयोग गरिएको परिकार पनि पाउन सक्नु हुनेछ।
यो रेस्टुराण्टले ईटालियन र अमेरिकन फ्युजन भएको परिकार पस्कनुको संगसंगै निकै राम्रो बारको व्यवस्था पनि गरेको छ। यो बारको नाम द थर्टि सिक्स रहेको छ। यहाँ हजुर क्यासिना सोफामा आफ्नो डेट संग बसेर रोमान्टिक साँझ बिताउन सक्नु हुनेछ
२. कासिता (Casita)
कासिता पनि अर्को अप्स्केल टेरेस रेस्टुराण्ट हो। यहाँ हजुरले निकै क्याजुअल वाताबरणमा ईटालियन कक्टेल र खानाको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ। यदि हजुर पर्फेक्ट डेट नाईट्को खोजीमा हुनु हुन्छ भने यो टोकियोको बेस्ट ठाउँहरु मध्यको एक हो। यो रेस्टुराण्टको लक्जरी फीलले हजुरलाई छुट्टै दुनियामा पुर्याउने छ।
यो शिबुयाको आओयामा भन्ने ठाउमा छ। हजुर यो ठाँउ ओमोतेसान्दोस्टेसनको B2 एक्जिटबाट निस्किनु भयो भने सजिलै पुग्नु हुनेछ। कासिता ईटालियन पेस्ट्रि र फुल कोर्स मिल बाहेक आफ्नो वाईनको सेलेक्सनको लागि पनि निकै लोकप्रिय छ। यो ठाउ डिनरको समय मात्र नभई दिउसो पनि प्याक हुन्छ। यहाँ मानिस हरु लन्च र ब्रंच गर्न निकै मन पराउछन।
आफ्नो कन्भिनियन्स र लक्जरिअस टचले गर्दा यो रेस्टुराण्ट, इण्टिमेट साँझ खोज्ने कपलहरुको लागि उत्कृस्ट ठाउ हो। तर यो रेस्टुराण्ट हाई एण्ड भएकोले निकै महँगो छ। यदि हजुर यहाँ डिनर गर्ने प्लान गर्दै हुनु हुन्छ भने कम्तिमा पनि २ मान (20000) यनको बजेट बनाउनु होस्। टेरेसबाट हजुरले राति झलमल्ल बलेको टोकियो टावरको दृश्य देख्न सक्नु हुनेछ।
३. कागुराजाका स्ताजिओने (Kagurazaka Stagione)
यो रेस्टुराण्ट ईदाबाशिमा रहेको छ। यो ईटालियन रेस्टुराण्ट यति पपुलर छ कि हजुरले यहाँको अथेनटिक नापोलिटन खानाको लागि रिजर्भेसन नै गर्नु पर्ने हुन्छ। ओपन एर सेटिङ्गमा रहेको यो रेस्टुराण्ट सधै पाहुनाले भरिन्छ।काठको टेबल र आरामदायी सोफा भएको यो रेस्तुरांत ५औ तल्लामा रहेको छ। यो रेस्टुराण्ट हजुरहरुलाई मिठो डिनरले स्वागत गर्दछ।
हजुरले यहाको टेरेसमा क्यानडाल लाइट डिनर गर्न सक्नु हुनेछ। यहाँको फाईर ऊड पिज्जा जापानकै सबै भन्दा मिठो भन्दा फरक पर्दैन। यदि हजुर ब्यस्त सिन्जुकु नजिकैको केहि आधुनिक रेस्टुराण्टको खोजिमा हुनु हुन्छ भने कागुराजाका स्ताजिओने हजुरको प्रस्नको जवाफ हो।
कागुराजाकामा मन लोभ्याउने वाईन र पिज्जा मात्र नभई आफ्नो वेडिङ्ग सेलिब्रेट गर्न चाहनु हुनेहरुको लागि छुट्टै स्पेसल मेनु छ। हजुरले यो भेन्यु प्राईभेट ईभेण्टको लागि पनि बुक गर्न सक्नु हुनेछ। यहाँका स्टाफले हजुरको चोईस र बजेट अनुसार मेनुको चाजो पाजो पनि मिलाउने छन्। यदि हजुरलाई ओपन एर मन पर्दैन भने यहाँ ईनडोर रुमहरु पनि छन्।
यदि हजुर आफ्नो पार्टनर संग निकै रोमाण्टिक साँझ व्यतित गरेर आफ्नो सम्बन्धमा अझ गाढापन लीएर आउन चाहनु हुन्छ भने माथि दिईएका रेस्टुराण्ट आफ्नो रोजाईमा पार्नु होस्। यी तिनै ठाउ टोकियोको अप्स्केल लोकेसनमा भएकोले डिनर संग सगै रात्री स्काईलाइन र नाईट भ्युको मजा लिनुहोस्।